Igumbi lokulala elinye iflethi okanye indlu ekwicomplex @ Studio365 - I-Airbnb
Igumbi lokulala elinye iflethi okanye indlu ekwicomplex @ Studio365
Changklan, Chiang Mai, Thailand
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguMax
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMax iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Sinikezela ngegumbi lokulala eli-1 eligcweleyo, elinezixhobo zale mihla ezigcweleyo entliziyweni yeChiang Mai kunye nohambo olufutshane nje ukuya kwiimarike zasebusuku zaseChiang Mai kunye neetempile zesixeko.
Indawo yokuhlala iza negumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela elinye indawo yokuphumla kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Indlu ilala ngokukhululekileyo aba-2 kodwa inokuhlala ngokulula abantu abadala aba-4 kunye nokongeza iibhedi ezimbini ezongezelelweyo.
I-Studio365 ibekwe kwindawo enomona. Iyancedakala ngokubuyiselwa umva kwindlela ephambili, kodwa ikwindawo esembindini phakathi kweChiang Mai Night Bazaar kunye nesixeko esidala. Uya kufumana ngokoqobo amakhulukhulu eendawo zokutyela kunye neenketho zokutya umgama nje omfutshane kunye nokuba phakathi kohambo olulula lwe-Bazaar yobusuku kunye neemarike zokuhamba ezitalatweni ngeempelaveki.
Umbuki zindwendwe ngu- Max
Abasebenzi bolwamkelo abanobubele baya kuba bekhona ukusuka ngo-08:00 kusasa ukuya ku-5:00pm ukuze bancedise kuyo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso onokuthi uzifune xa ukwindlu yethu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Changklan